Ny Firenena Notsidihako Fahatelo Amin’ny Maha Vondrom-piarahamonin’ny Global Voices Ahy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Janoary 2018 7:25 GMT
(Fanamarihana: tamin'ny 18 Septambra 2014 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy)
Mpikambana maro ato amin'ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices—na “GVers” raha afohezina—no monina any amin'ny firenen-kafa ankoatra ilay firenena nahaterahany. Tsy fantatro ny antontanisa amin'izao fotoana izao, fa rehefa nihaona tamin'ny maro taminareo tany amin'ny Vovonana sy ny hetsika hafa aho dia hitako fa matetika itovizana ho an'ny GVers ny mipetraka any amin'ny firenena faharoa, na firenena fahatelo sy fahefatra mihitsy aza indraindray .
Any ambanivohitra Maraokana eto ny mpanoratra , tany amin'ny taona 2006
Tany amin'ny firenena faharoa nisy ahy aho, namahana bilaogy momba ny zavatra niainako rehefa niditra tato amin'ny GV. Notsongain'ny mpanoratra Maraokana Farah Kinani ny bilaogiko, ary nitady ny toniandahatsoratra aho (mbola i Amira ilay sariaka lalandava!) hanontany raha afaka miditra ho mpikambana ny tenako. Fito taona taty aoriana, ary tantara ny sisa .
Tena nahafinaritra ny nanoratra tantara momba an'i Maraoka – Nanampy ahy tamin'ny fahaizako teny Frantsay izany, nahafantarako ireo bilaogera tao amin'ny firenena izay mbola antsoiko hoe namana, ary nahafahako nanomboka ny asako, raha toa ka tena manao ny marina isika eto. Raha tsy maintsy nody aho taoriana kely tamin'io taona io noho ny antony manokana, nanome ahy fifandraisana tamin'ny firenena izay tsy afaka ato an-tsaiko ny fanoratako momba an'i Maraoka ho an'ny Global Voices .
Kanefa nihena hatrany ny fifandraisako tamin'ny firenena sy ny tontolon'ny bilaogy (“blogoma”) rehefa nandeha ny taona ary nanomboka nanitatra ny asako aho, nanao fitateram-baovao momba an'i Palestina, na Egypta, na Syria rehefa tsy afaka nanao izany ireo mpiara-miasa tamiko, na nampifandray ireo olana tao amin'ny faritra tiako (Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra) tamin'ny firenena niaviako. Nandray anjara tamin'ny Global Voices Advocacy ihany koa aho, nanangom-baovao ny olana mikasika ny sivana ary nanampy tamin'ny fivorian'ireo bilaogera Arabo .
Tamin'ny diako voalohany ho any Berlin…izay nijanonako niaraka tamin'ny GVers mazava ho azy.
Tamin'ity volana ity, efa ho fito taona taorian'ny nialako tany Maraoka nankany Etazonia, nifindra toeran-kafa indray aho, tany Berlin, Alemaina tamin'ity indray mitoraka ity. Mbola nipetraka tany amin'ny toerana iray vaovao tanteraka indray aho, ary nahita ny tontolo avy amin'ny fomba fijery vaovao tanteraka. Somary hafa kely ny mifindra mankany ivelany rehefa nahazo taona ianao. Ny antony, tsy ory ara-bola aho ary nanana asa nahafinaritra izay mbola nahafahako indray nivezivezy, ka tsy nahatsiaro voasakana velively (na manina ny fireneko) aho.
Raha niverina tao amin'ny Global Voices indray aho dia tsy dia nitatitra firy momba ireo firenena “Tandrefana” izahay – nihevitra izahay fa efa tsara tatitra avy amin'ny fampahalalam-baovao ireo toerana ireo, ary ny hampitombo ny feo izay tsy misy mandre ny iraka voalohany. Raha mbola tsy voatati-baovao matetika i Alemaina, dia niova tanteraka ny zava-drehetra. Niova ireo “fitsipika” rehefa nihalehibe sy niely ny vondrom-piarahamonina , ary noho ny fahitana fa mety tsy hanao tatitra momba izany fotsiny ny fampahalalam-baovao mahazatra amin'ny fitondrana ny fomba fijery Eoropeana any Etazonia (na ny mifamadika amin'izany), ohatra, dia hitako fa nihamaro hatrany ny fanangonam-baovao ireo faritra ireo.
Rehefa nanomboka nianatra teny alemà aho ary nipetraka tao an-toerana, fantatro ny toerana nisy ny fomba tsara indrindra………… avy amin'ny famakiana bilaogy, fihaonan'ny mpanoratra sy ny bilaogera hafa, ary lasa nahafantatra ny vondrom-piarahamonina GV tao Berlin sy manerana an'i Eoropa!
Nisafidy an'i Matthew, Ndesanjo ary Sara i Jillian York amin'ny fanaovana GV Challenge
6 ora izayAzia Afovoany sy Kaokazy